warkii.com » Ole Gunnar Solskjaer Oo Shaaca Ka Qaaday Qorshaha Manchester United Ee Suuqa Xagaagan
Ole Gunnar Solskjaer Oo Shaaca Ka Qaaday Qorshaha Manchester United Ee Suuqa Xagaagan
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku adkaystay in Manchester United ay horumar ku samayn doonto safka ciyaartoygeeda marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaagan, isla markaana ay isticmaali doonto ciyaartooyo da’yar oo ay kasoo dallacsiin doonto kulliyaddeeda.
Kooxaha horyaalka Premier League ayaa awoodi doona inay ciyaartooyo cusub soo iibsadaan laga bilaabo Isniinta toddobaadka dambe oo uu suuqiu si rasmi ah u gurmi doono, waxaana Red Devils ay rajaynaysaa in dhawr ciyaartoy oo muhiim ah ay kasoo qaadan doonto.
Laakiin qorshaha Red Devils waxa saamayn ku yeelan doona booska ay kaga dhamaysato horyaalka Premier League, waxaana kala duwanaan doonta qaabka ay u adeeganayso haddii ay usoo gudubto Champions League iyo haddii ay Europa League ku koobnaan doonto xili ciyaareedka soo socda.
Maalinta Axadda ayay Manchester United iyo kooxaha kale ee horyaalka u caddaan doontaa intooda hirdamaysa, halka ay kaga dhamaysanayaan horyaalka, sababtoo ah, waa maalinta ugu dambaysa ee lasoo gabogabaynayo tartanka.
Red Devils ayaa lala xidhiidhinayaa ciyaartooyo ay ka mid yihiin weeraryahanka Borussia Dortmund ee Jadon Sancho iyo Kabtanka Aston Villa ee Jack Grealish oo labadoodaba lacag qaali ah ay kooxahoodu ku xidhayaan.
Ole Gunnar Solskjaer waxa la filayaa inuu si fiican iskugu diyaarin doono xili ciyaareedka dambe haddii ay West Ham iyo Leicester City ka adkaadaan oo ay xaqiijistaan booskooda Champions League, laakiin waxa kale oo uu kooxda ka diri doonaa tiro ciyaartooyo ah oo aan waxqabad badan lahayn, si uu u yareeyo mushaharka ay qaataan, isla markaana lacag looga helo iibkooda.
Ciyaartoyda aanay waxba u oollin Old Trafford, waxa ka mid ah Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo iyo Jesse Lingard. Sidoo kale, laacibka mushaharka waallida ah qaata ee Alexis Sanchez ayaa laga yaabaa in waddada la tuso.
Dhinaca kale, waxa uu Ole Gunnar Solskjaer soo dallacsiin doonaa ciyaartooyo da’yar oo ay ka mid yihiin Teden Mengi iyo Ethan Laird oo 18 jirro ah, kuwaas oo haddaba tababarka la qaata kooxda waaweynka.
Ole Gunnar Solskjaer oo wax laga weydiiyey qorshaha suuqa ee kooxdiisa ayaa yidhi: “Kooxda waxa ka jira dareen ah inaanu wanaagsanahay marka aanu ciyaarno ee aanay jirin dhaawacyo, sidaa darteed, laakiin kooxdu waxay mar walba doonaysaa inay soo dallacsiiso da’yarta iyo inaanu kusoo darno ciyaartooyo si uun uga wanaagsan kooxda aanu hadda haysano. Balse marka hore, waxaanu diiradda saari doonaa labada ciyaarood ee noo hadhsan.”